खाडी मुलुक जानेको मिर्गौलामा समस्या - कसरी बढ्दैछ यो समस्या ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
खाडी मुलुक जानेको मिर्गौलामा समस्या – कसरी बढ्दैछ यो समस्या ? जान्नुहोस्
रोजागारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जानेहरुमा मिर्गौला फेल हुने समस्या बढी देखिएको अस्पतालहरुको अनुसन्धानले देखाएको छ । खाडी मुलुक र मलेसियाबाट फर्कनेहरुमा मिर्गौलाको समस्या बढी पाइएको अस्पतालका तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
टिचिङ अस्पतालमा मिर्गौला विभागका अनुसार औसत चार जना विदेशमा काम गरिसकेका बिरामी मिर्गौला बिग्रिएर आउने गरेका छन् । राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण भएकामध्ये ४० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाटै आएको छन्। केन्द्रमा
अहिलेसम्म एक सय ३० जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
मिर्गौला बिग्रेर आउनेमा पहिलो नम्बरमा कतार छ । दुबई, मलेसिया र साउदीबाट आउने संख्या दोस्रो, तेस्रो र चौथा नम्बरमा छ । २० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका बढी भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाए।
किन हुन्छ मिर्गौलामा समस्या ?
सुविन श्रेष्ठलाई १२ वर्षको उमेरमै मिर्गौलामा समस्या देखियो । मिर्गौला फेर्नुपर्ने सल्लाहपछि निकै आत्तिएका उनी अहिलेसम्म आयुर्वेदिक उपचारबाट स्वस्थ जीवन बिताइरहेका छन् । मानिसको शरीरमा १ दशमलव ४ एमजीलाई सामान्य मानिन्छ तर सुविनको मृर्गौैैलामा क्रिटिनाइन (शरीरको फोहर) ३ एमजी देखियो ।
उनका बाबु फणीन्द्रले धेरै चिकित्सकको परामर्श लिनुभयो । मिर्गौला फेर्नुपर्ने नै सल्लाह दिएपछि निराश हुनुभएका उहाँले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति थाल्नुभयो र १६ वर्षे सुविन अहिलेसम्म विना डायलासिस स्वस्थ्य छन् ।
कुपण्डोल गुरुद्वारा नजीकै रहेको गणेश आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य गणेशबहादुर राउतसँग आवश्यक परामर्श लिएर औषधि खान थालेपछि क्रिटिनाइन विस्तारै कम हुँदै आएको र अहिले उनी सामान्य अवस्थामा छन् ।
आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले फोहरलाई दिसा/पिसाबबाट बाहिर निकाल्छ । मिर्गौला क्रमशः प्राकृतिक रूपमै सक्षम हुँदै आउँछ । डायलासिस गरिसकेपछि यो विधिले काम दिँदैन, किनभने शरीरको प्राकृतिक संरचनामा समस्या आइसकेको हुन्छ ।
वैद्य राउतले विसं २०४५/४६ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहायतामा १५ महीने आयुर्वेदिक तालीम लिइ निरन्तर खोज तथा अनुसन्धान गरेर मिर्गौला खराबी हुँदा क्रिटिनाइन बढ्न नदिन काम गरिरहनुभएको छ । उहाँको उपचार पद्धतिबाट क्रिटिनाइन भर्खर बढ्न शुरु भएकालाई दुई÷चार महीनामै सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ तर अत्यधिक बढेकाका लागि भने केही समय लाग्न सक्छ ।
यसकारण तन्नेरीमै गुम्दैछन् मिर्गाैला :
नेपालमा मिर्गाैला रोगको अवस्था कस्तो छ भनेर यकिन तथ्यांक नभए पनि समग्रमै रोगी बढ्दो मात्रामा छन् । वीर अस्पतालका मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. अनिल बराल भन्छन्, ‘मिर्गाैलाको उपचार गर्ने ठाउँ र डायोलोसिस सेन्टर बढ्दा पनि हामीकहाँ आउने बिरामी घटेका छैनन् ।’
भीडभाड धेरै हुने राजधानीको सुन्धारादेखि न्युरोडगेटसम्मका आवाजहरु त्यो बाटो ओहोरदोहोर गरेकाले सुनेको हुनुपर्छ । ध्यान दिएर सुन्नेलाई थाहा होला, त्यहाँ सुनिने प्रायः स्पिकरमा मिर्गाैला फेल भएर सहयोगको याचना गरिएको हुन्छ । रत्नपार्क, रानीपोखरी, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मान्छेको आवतजावत हुने ठाउँमा पनि मिर्गाैला रोगी सोही अवस्थामा भेटिन्छन् । सडकपेटीमा जीवनका केही दिन लम्ब्याउन गुहार माग्नेमध्ये धेरैको उमेर ३५ कटेको सुनिँदैन । धेरै राष्ट्रिय दैनिकमा ‘मलाई बचाउनुहोस्’ शीर्षकका पाठकपत्र पढ्ने हो भने पनि युवा उमेरमा मिर्गाैला गुमाएर उपचार अभाव खेपिरहेको दारुणिक कथासहितको याचना देखिन्छ ।
डाक्टहरु भन्छन्– रोगले उमेर, वर्ग र जात छुट्याउँदैन । तर, मिर्गाैला रोगले नेपालमा उमेर छुट्याउन थालेको छ । शिक्षण अस्पतालमा एकतिहाइ बेड मिर्गाैला रोगीले ओगटेका छन् र तीमध्ये अधिकांश युवा उमेरका छन् । शिक्षण अस्पतालका मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. महेश सिग्देलका अनुसार मिर्गाैला रोगबाट युवा अवस्थामै ग्रसित हुनेको संख्या विश्वको तुलनामा नेपालमा बढी छ । उनी भन्छन्, ‘विश्वका अरु देशमा पाको उमेरमा मिर्गाैलाको समस्या लिएर अस्पताल धाउने धेरै हुन्छन् भने नेपालमा युवावस्थामै मिर्गाैला फेल भएर अस्पताल आउनेको संख्या धेरै छ ।’
मिर्गाैलाले दिनभरिमा करिब १ सय ८० लिटर रगत फिल्टर गर्नुपर्छ । तिनमा भएको डेढदेखि दुई लिटर पानी मिर्गाैलाले मूत्रनलीमा पठाउँछ भने बाँकी रगत र पानी शरीरभरि फैलाउँछ । मिर्गाैलाले यसो गर्न नसकेको खण्डमा त्यो बिग्रिएको वा फेल भएको भन्ने बुझिन्छ । मिर्गाैला फेल भइसकेपछि बिरामीसँग तीनवटा विकल्प हुने वीर अस्पतालका डा. बरालले बताए । एउटा विकल्प हेमोडायलाइसिस हो ।
दोस्रो पेरिटोनियल डायलाइसिस र तेस्रो विकल्पचाहिँ प्रत्यारोपण हो । हेमोडायलाइसिस भनेको मिर्गाैलाले गर्ने सारा काम मेसिनद्वारा गराइनु हो । पेरिटोनियल डायलाइसिस बिरामी आफैँले गर्न सक्छन् । तर, यो विधि नेपालमा खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ मान्छेको शरीरमा नयाँ मिर्गौला राख्ने विधि हो । प्रत्यारोपण गर्दा शल्यक्रियामार्फत स्वस्थ मानिसका दुइटामध्ये एउटा मिर्गौला झिकेर बिरामीको शरीरमा हालिन्छ । सरकारी अस्पतालमा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र निजी अस्पतालमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरपुरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
Don't Miss it स्वादको लागी लसुन खाने गर्नुहुन्छ कि स्वास्थ्यको लागी ? जान्नुहोस् यसका फाईदा
Up Next राजमा खादाका फाइदा जानेर तपाइ चकित पर्नुहुनेछ
सावधान ! मासु खानु अघि यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
मासुको चर्चा गर्नुअघि फ्याट अर्थात् चिल्लो पदार्थको वर्गीकरणवारे बुझ्न जरुरी छ । फ्याट दुई प्रकारका हुन्छन्, स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड ।…
बाडुली रोक्न केहि घरेलु उपाय, यस्ता छन्
चिनी- बाडुली आउँदा तुरुन्तै एक चम्चा चिनी सेवन गर्नुहोस् । केही समयपछि बाडुली आउन रोकिन्छ । भिनेगर- भिनेगरको प्रयोग थुप्र्रै…
शरीरमा मुसा आएको छ, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब
हाम्रो छालामा जिवाणुको कारणले गर्दा स–सानो मासु पलाउने गर्दछ त्यसलाई हामि मुसा भन्छौ । जस्ले हाम्रो छालाको माथिल्लो तहमा असर…